Khulisa ama-imeyili we-imeyili ngokwabelana nomphakathi | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 28, 2013 Douglas Karr
GetResponse ihlanganise i-infographic kumthelela jikelele wokuhlanganyela komphakathi kumazinga wokuchofoza nge-imeyili… futhi imiphumela iyamangalisa.
Inombolo yabasebenzisi abafaka izinkinobho zokwabelana komphakathi kuma-imeyili abo lenyuke lisuka ku-18.3% laya ku-29.4%. Uma kuqhathaniswa nemiphumela yangonyaka odlule, lokho kukwanda ngama-61%. Okumangalisa nakakhulu imiphumela yokusebenza ephezulu kakhulu yezincwadi zezindaba ezibandakanya izinkinobho zokwabelana komphakathi. Lawo ma-imeyili abene- isilinganiso sokuchofoza esilinganisweni (CTR) esingu-158% ngaphezulu kunama-imeyili angafakwanga ukwabelana komphakathi.
Buka i-infographic engezansi bese landa wonke umbiko kusuka ku-GetResponse.
Tags: isilinganiso sokuchofozaisilinganiso sokuchofozactrimeyilii-imeyili ctrimeyili Marketingimeyili socializinkinobho zenhlaloSocial Media Marketingukwabelana komphakathi